Ravin'ny tavy Tadalafil (171596-29-5) mpamokatra sy mpamatsy - Factory
SKU: 171596-29-5 Sokajy: Sex Hormone
Solubility (78 mg / ml amin'ny 25 ° C), dichloromethane et ethanol (<1 mg / ml à 25 ° C)
Storage Temperature Tehirizina amin'ny hafanana eo anelanelan'ny 59 ° F sy 86 ° F (15 ° C sy 30 ° C). Aza mitahiry izany fanafody izany any amin'ny faritra marefo na maivana.
Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6] pyrido [3,4-b] Cialis), dia karazana PDE1,4 inhibitor ary fanafody am-bava. Izy dia derivatif b-carboline ary miavaka tsara amin'ny vardenafil (Levitraw) sy sildenafil (Viagraw), izay samy PD500NUMX inhibitor miorina amin'ny rafitra fototra pyrimidine manamafy. Ny vovobony Tadalafil (CAS 5-5-171596) dia mampitombo ny rà mankany amin'ny corpus cavernosum amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny hozatry ny lalan-dra, ary izany dia ahafahan'ny lehilahy mahavita fivoarana. Ny vovobony Tadalafil dia neken'ny Etazonia (Etazonia) Sakafo ara-tsakafo sy fanafody (FDA) any 29 ho an'ny fitsaboana ny fika (ED), ary namidy eran-tany tamin'ny alàlan'ny marika Cialis. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny hypertension arterial pulmonary sy benign prostplasia hipoka, toe-javatra izay mihalehibe ny glandidan'ny prostate, ary miteraka olana amin'ny urination.
Tadalafil ny manavaka ny fikarakarana ara-pahasalamana dia ny antsasak'adiny (ora 17.5) raha oharina amin'ny Viagra sy Levitra (4-5 ora). Ity valim-piainana lava ity dia mamaritra ny faharetan'ny asa ary ny ampahany, tompon'andraikitra amin'ny anaran'i Cialis ao amin'ny "faran'ny herinandro." Ity halavan'ny androm-piainana ity koa no fototry ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao mikasika ny fampiasana tadalafil amin'ny fiakaran'ny tosidra mihatra amin'ny arterial fitsaboana iray isan'andro.
Ny fanorenana ny penile mandritra ny fanentanana ara-nofo dia tratran'ny fialan-tsasatra ny arteries ary ny corpus cavernosal miavonavona, ka mitarika ny fitomboan'ny rà mankany amin'ny taova. Ity fialam-boly ity dia ahafahan'ny rà fampidiran-dra amin'ny alàlan'ny penile arteries, raha io rà io dia mameno efitrano roa ao anaty penis antsoina hoe cavernosa corpora. Rehefa mihena ra ny efitranony dia mihamitombo ny penis. Rehefa tapitra ny fifanarahana amin'ny hozatry ny taolam-paty, dia mety hipoitra ny ra.
Io valinteny io dia fanelanelanana amin'ny famoahana ny nitratôksidra nitrika (TSY) avy amin'ny sisin'ny nerveo sy ny sela endothelial, izay mandrisika ny fihanaky ny cGMP amin'ny sela hozatra ary avy eo mifehy ny fanalefahana sy ny fanenerana ny lalan-dra izay mitondra ra mankany ary avy amin'ny penis. Ny rivodoza GMP dia miteraka fanalefahana ny hozatra malefaka ary mampitombo ny fikorianan-dra ao amin'ny corpus cavernosum, ary manala ny karazany 5 (PDE5) ny corpus cavernosum izay manodidina ny penis. Tadalafil dia manakana ny PDE5 ary noho izany dia mihamitombo amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny haben'ny cGMP misy. Tigilfil dia manakana ny PDE5 tsy handringana cGMP ary avy eo hampitombo ny cGMP efa misy mba hahatratrarana ny fiasa ary mahatonga ny fipetrahana haharitra kokoa.
Na izany aza, rehefa fohy ny antsasak'i Tadalafil dia fohy ny vokany rehefa miala ny andro 2 izay hiverina ny PDE5 sy ny fahasalamanao ara-nofo - miharatsy. Mety mila maka fotoana ela kokoa ianao mba hahatratrarana ny vokatra tianao, toy ny low-strength Cialis 4-5 andro ho andro 4-5.
Norepinephrine blocker blocker
Muonorio agonist receptor
Recommended Tadalafil vovoka Dosage
Ny Cialis dia avy amin'ny tabilao misy mavo, sarimihetsika sy mamelatra amin'ny alàlan'ny 5, 10 ary 20 milligram (mg). Ny dopam-pamindrana Cialis natokana ho an'ny fampiasana ilaina amin'ny ankamaroan'ny marary dia ny 10 mg, nalaina talohan'ny fikarohana ara-pananahana.
Ny dosie voalohany dia 10 milligrams (mg) farafahakeliny 30 minitra mialoha ny fanaovana firaisana ara-nofo. Ny doka dia afaka mitombo amin'ny 20 mg na mihena amin'ny 5 mg, mifototra amin'ny fahombiazan'ny tsirairay sy ny fahalefahana. Nefa, ny fara-tampony dia 20 mg ho dôza tokana. Ny fotoana farafahakeliny amin'ny ankamaroan'ny marary dia matetika no manome isaky ny isan'andro isan'andro. Tsy tokony handany mihoatra ny dose iray amin'ny ora 24 izy io. Ny marary izay manantena ny hanao firaisana ara-nofo farafahakeliny in-droa isan-kerinandro dia afaka mahazo dose isan'andro amin'ny 5 mg, ary mety hidina amin'ny 2.5 mg indray mandeha isan'andro, arakaraka ny fihetsiky ny tsirairay.
Ny vovobon'ny Cialis ho ampiasaina raha ilaina dia hanatsarana ny fiasa raha oharina amin'ny plasebo hatramin'ny ora 36 taorian'ny fatra. Noho izany, rehefa manoro hevitra ny marary amin'ny fampiasana tsara ny vovony Cialis, dia tokony hodinihina izany.
Tsara ny manamarika fa tsy hitranga ny fipetrahana raha tsy maka pilina fotsiny. Ary aza mandray Cialis ho an'ny dysfunction raha maka Adcirca amin'ny hypertension arterial pulmonary ianao. Etsy ankilany, Tadalafil ho an'ny disfunction dia natao ho an'ny olon-dehibe ihany koa izay 18 taona sy ambony.
• Ny poizina Tadalafil dia mety hanampy amin'ny fanalefahana ny hozatra ao amin'ny prostate sy ny blaoginao. Izany dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny soritraretanao BPH.
♦ Hanatsara ny tsindrona ED, ny tadalafil dia manampy amin'ny fitomboan'ny rà mandriaka amin'ny penis. Izany dia afaka manampy anao hahazo sy hitazona fananganana. Ho an'ny vovobony tadalafil hanampy anao hanana fananganana, mila mila firaisana ara-nofo ianao.
♦ Ho an'ny PAH, ny tadalafil poopy dia miasa mba hanatsarana ny fahaizanao mampihatra amin'ny fantsona ra ao amin'ny havokavoka. Mampitombo ny fampidiran-dra izany.
Miaraka amin'ny vokatra ilainy, dia mety hisy vokany tsy nirinao ny fitsaboana iray. Na dia tsy mety avokoa aza ny fiantraikan'izany rehetra izany, raha toa izy ireo dia mety mila fitsaboana. Azafady azafady ny voka-dratsin'ny tadalafil:
Ny vokatra iombonana iombonana
▪ kivy be
▪ milomano (hoditra mena)
▪ siramamy na mandroso
Zava-tsoa hafahafa fa misy fiantraikany ratsy
Fitambarana maharitra izay mety hitondra fahavoazan'ny penis, ny fahitana momba ny fahitana, ary ny fihenan'ny fihenan-tsakafo.
Raha mora ny vokatr'izany, dia mety hiala ao anatin'ny andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy izy ireo. Raha toa ka matanjaka kokoa izy ireo na tsy mandeha, dia miresaha amin'ny dokotera na pharmacista anao.
Ny olona miaraka amin'ireto fepetra manaraka ireto dia tsy tokony handray ny voly Cialis raha tsy manaiky ny dokotera:
▲Ny olana ara-pihetseham-po, angina, na karazana aretim-po rehetra
▲Hery ambony na ambany
▲Ny tsy fahombiazan'ny fo na ny hafanam-po ao anatin'ny volana 6 farany, na ny infarction ny voan'ny aretim-poko ao anatin'ny volana 3 farany
▲Ny selan'ny selan'ny sela, mielôla maromaro, hemôpia, leokemia, na aretina hafa amin'ny ra
▲Ny fihenan'ny pneoma na ny voa
▲Ny fitevehana alikaola
▲Famaritana ny endriky ny penis, toy ny aretina Peyronie
▲Ny toe-pahasalamana rehetra izay nanolorana azy ireo tsy hanao firaisana ara-nofo
Rehefa mampiasa tadalafila ianao, dia mety hisy zava-mahadomelina hafa mety hisy fiantraikany amin'ny zava-mahadomelina, izay mety miteraka vokatra hafa. Ny fiovan'ny zava-mahadomelina dia mety hanova ny fomba fanaovanao ny fanafody na hampitomboanao ny mety ho voka-dratsiny.
Ny Tadalafil dia manana fiantraikany amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fihenan'ny nitrate indraindray amin'ny tosidra. Tadalafila dia mety hiteraka fiantraikany goavana amin'ny tosidra rehefa ampiasaina amin'ny nitrate izany, izay mety hitarika ho amin'ny fidorohana, ny fahantrana, ary ny tsy fahampian'ny aretim-po. Aza mampiasa tadalafil amin'ny iray amin'ireto: fanafody sasany ampiasaina amin'ny fanaintainana tratra an-tratra / angina (nitrate toy ny nitroglycerine, isosorbide), zava-mahadomelina antsoina hoe "poppers" misy amyl na butil nitrite.
Raha toa ka mandray fanafody alpha-blocker (toy ny doxazosin, tamsulosin) ianao amin'ny fanafarana prostate / bPH na avo lenta ambony, ny tosidranao dia mety ho lasa ambany loatra ka mety hitarika ho amin'ny fahatarany na ny alahelo. Ny dokotera dia mety hanomboka fitsaboana miaraka amin'ny tadalafil kely ambany na manitsy ny fanafody alpha blocker mba hampihenana ny mety hiterahanao ny tsindry ambany.
Amin'ny fanadihadiana klinika, ny valim-pifandraisana lehibe dia voalaza fa hatramin'ny 36 h taorian'ny fandidiana zava-mahadomelina. Ny Tadalafil dia betsaka amin'ny metabolika ao anaty atiny amin'ny CYP3A4 ho an'ireo sampandraharaha izay tsy mazoto manohitra ny PDE5 ary mivoitra toy ny metabolita ao anaty feces sy ny urine. Ny pharmacokinetics ny tadalafil dia tsy voarohirohy amin'ny singa toy ny fihinanana sakafo sy alikaola, ny taonany, ny fisian'aretina, ary ny tsy fahampian'ny hepatic tsotra na antonony. Ny hetsika maharary indrindra amin'ny zava-mahadomelina indrindra dia aretin'andoha, fanaintainan'ny lamosina, dyspepsia, ary myalgia. Amin'ny fatran'ny 10 sy 20 mg dia tsy misy fiatraikany lehibe amin'ny tsindry amin'ny tosidra ary ny fitempon'ny fony i Tadalafil ary tsy miteraka fitomboan'ny trosa miokaretina. Ny tatitra momba ny fananganana lava maharitra mihoatra ny 4 h sy priapism dia voamarika tamin'ny fampiasana tadalafil. Priapism, raha tsy voatsabo tsara dia mety hiteraka fahasimbana tsy azo ovana. Ireo marary izay manana ety dia maharitra lavitra noho ny 4 h dia manoro hevitra ny hitady fitsaboana maika. Ao amin'ny marary diabeta, ny fanatsarana ny fiasa amin'ny tadalafil dia tsy eken'ny karazan'aretin'ny diabeta sy ny karazana diabeta.
Ny fanafody hafa dia mety hisy fiantraikany amin'ny fanesorana ny tadalafil amin'ny vatanao, izay mety hisy fiantraikany amin'ny fomba iadian'ny tadalafil. Anisan'izany ny antibiotika azole (toy ny itraconazole, ketoconazole), antibiôtika macrolide (toy ny clarithromycin, erythromycin), ny hemôglomycin proteases HIV (toy ny fosamprenavir, ritonavir), ny hepatitis C virus-inhibitors (toy boceprevir, telaprevir), rifampin, .
Aza maka an'io fanafody io amin'ny vokatra hafa izay misy tadalafil na fanafody hafa mitovy aminy ampiasaina amin'ny fitsaboana ny dysfunction-ED na hypertension pulmonary (toa ny sildenafil, vardenafil).
Momba ny fifandraisana amin'ny tadalafil amin'ny zava-mahadomelina hafa dia mbola betsaka ihany koa, raha te hampiasa zava-mahadomelina miaraka amin'ny tadalafil poids (CAS 171596-29-5) ianao, dia tadidio aloha ny manatona ny dokotera ary hanome torohevitra azo antoka sy azo antoka izy.
Ny volo Tadalafil, ny voly sildenafil, ary ny vardenafil vardenafil dia manao fihetsika amin'ny fampihenana ny enzyme PDE5, fa ireo zava-mahadomelina koa dia manakana ny PDE enzymes 6, 1, ary 11 amin'ny ambaratonga samihafa. Ohatra, Sildenafil sy vardenafil manakana ny PDE6, enzym iray hita eo amin'ny maso, mihoatra noho ny tadalafil. Ny sasany amin'ireo mpampiasa sildenafil dia mahita loko marevaka ary manana fihenam-bava amin'ny fahazavana noho ny fihenan'ny PDE6. Ankoatra izany, Sildenafil sy vardenafil ihany koa dia manakana ny PDE1 mihoatra ny tadalafil. Ny PDE1 dia hita ao amin'ny atidoha, ny fo, ary ny hozatra manify volo. Heverina fa ny fihenan'ny PDE1 amin'ny sildenafil sy vardenafil dia mitarika ny vasodilation, spushing, ary tachycardia.
Raha oharina amin'ny fampisehoana ao amin'ny PDE6 sy PDE1, ny tadalafil dia nilamina kokoa tao amin'ny PDE11. Ny PDE11 dia miseho amin'ny hozakelin'ny skeleta, ny prostate, ny aty, ny voa, ny glandy, ary ny fitsapana. Na izany aza dia tsy fantatra ny fiantraikan'ny vatana mangatsiaka PDE11.
Vola Finasteride vita amin'ny ravina (98319-26-7)
Ny fantsom-bokotra Finasteride dia fanafody FDA nankatoavina izay mitondra ny fihenan'ny volo amin'ny lehilahy amin'ny fanakanana ny DHT (dihydrotestosterone). DHT dia hormonina voaaro .......
fahafahana: 1386kg / volana